10 सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन शहरहरू युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन शहरहरू युरोप मा
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 31/10/2020)
युरोप को पूर्ण छ धनी इतिहास र विविधता. वास्तबमा, कुनै कुरा तपाईं कहाँ जाने, तपाईं शायद हेर्न रहेको विगतमा सभ्यताहरू. कहिलेकाहीं, यी स्थानहरू छन् लाज भग्नावशेष. अर्कोतर्फ, यी स्थानहरू गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा बाँचेका छन् समय को परीक्षण र एकीकृत आधुनिक संसारमा. एक ट्रेन सेव तपाईं लिन्छ मा एक भ्रमण 10 सबैभन्दा सुन्दर मध्ययुगीन शहरहरू युरोप मा. कि सुन्दर सहर हेर्न तयार मिश्रण इतिहास र आधुनिक जीवन तत्व संग कि मध्ययुगीन अवधि गर्न मिति फिर्ता.
1. सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन सहरमा युरोप – Delft, नेदरल्यान्ड्स
If you are looking for एक शहर शामिल कि एक मध्ययुगीन महसुस आधुनिक संसारमा, कुनै थप भन्दा हेर्न Delft. डेल्फ्ट कला उठाउँछ गर्ने देखि यो मनसायलाई संग सम्बन्धित छ कुनै एक घण्टी बज्दैन सक्छ डच चित्रकार Vermeer. वास्तबमा, if तपाईं कहिल्यै यात्रा शहर, तपाईं महसुस भने तपाईं छन्, यो पेंटिंग नै. तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन् को सार महसुस चित्रकला हिँडिरहेका बेला माध्यम शहर. When it comes to मध्ययुगीन भवनहरु, there isaRenaissance शैली टाउन हल र एक मध्ययुगीन चर्च संग एक प्रभावशाली leaning टावर. अलग देखि महत्वपूर्ण मध्यकालीन वास्तुकला कि तपाईं छक्क पार्नु हुनेछ, Delft पनि असंख्य नहरहरुमा भन्ने माध्यम जान शहर बनाउन र माहोल अद्वितीय.
Hallstatt लाग्न सक्छ, परिचित मान्छे भनेर पालन picturesque पर्यटक गन्तव्यहरू मा Instagram. छन् धेरै तेजस्वी फोटो देखि क्षेत्र, र एक पटक तपाईं भ्रमण शहर, तिमी किन थाहा हुनेछ. लिएर एक खराब तस्वीर आवश्यकता हुनेछ, प्रयास को एक धेरै कारण शानदार तालको शहर छ, छ जो एउटा अचम्मको दृष्टि. पनि, यो सम्पूर्ण नजर र लाग््छ को शहर छोड्न हुनेछ तपाईं श्रद्धा. सारा ठाउँ छ, एक Baroque यो महसुस, र यो यति प्रभावशाली थियो कि एक ठानिने यूनेस्को विश्व विरासत साइट. अनुभव मध्ययुगीन महसुस को Hallstatt मा आफ्नो अर्को यात्रा गर्न अस्ट्रिया.
म्यूनिख Hallstatt गाडिहरु गर्न
नाइस Hallstatt गाडिहरु गर्न
Passau Hallstatt गाडिहरु गर्न
Rosenheim Hallstatt गाडिहरु गर्न
3. सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन सहरमा युरोप – Echternach, लक्समबर्ग
साँच्चैईrnach जेठा शहर मा Luxemburg, र यो स्थित छ वरिपरि पर्खाल को Echternach Abbey. यो घर धेरै पुराना र प्रभावशाली ऐतिहासिक ठाउँमा, यस्तो चर्च सेन्ट पत्रुस र पावलले, को Basilica को सेन्ट Willibrord, एक गोथिक styled बजार, र एक रोमन विला फिर्ता तिथिहरु कि पल्ट को रोमन साम्राज्य. सडकमा माध्यम हिड्ने Echternach जस्तै महसुस हुनेछ तपाईं मा मध्ययुगीन पटक. तथापि, यो सबै को सान्त्वना आधुनिक विश्व र अन्धकारमा उमेर.
4. कार्कास्सोन, फ्रान्स
कार्कास्सोन एक मध्ययुगीन शहर छ कि पर्खालले घेरिएको off from the rest of the world. पर्खाल र टावर मिति फिर्ता गर्न यो 13 सताब्दी र साँच्चै दिन को शहर को नजर र लाग््छ को एक मध्ययुगीन गाउँमा. आजकल, कार्कास्सोन एक यूनेस्को विश्व सम्पदाको साइट दिन्छ कि तपाईं को भावना तपाईं समय मा फिर्ता यात्रा. यो enchanting र जादुई वातावरण पुरानो संसारको वातावरण अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ कि असंख्य पर्यटक मा ड्र.
Carcassonne गर्न नैरबन
Carcassonne गर्न टूलूस
Carcassonne गर्न montpellier
Carcassonne गर्न निमेस
5. सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन सहरमा युरोप – हीडलबर्ग, जर्मनी
हीडलबर्ग मा स्थित छ एक एकदम inhabitable क्षेत्र. वास्तबमा, यो क्षेत्र घर भएको मान्छे वर्ष को लागि. नदी Neckar र अनुकूल जलवायु गर्न निकटता ठाउँ राम्रो घर बनाएको छ. वर्ष भर, Heidelberg भएको छ मान्छे को लागि केन्द्र. वास्तबमा, यो देखिने यो माहोल र वास्तुकला को शहर. एक उत्कृष्ट Baroque शहर केन्द्र र एक अविश्वसनीय महल छन्, बस दुई कुराहरू, कि तपाईं देखाउन, को richness र महानता को क्षेत्र मा छ boasted भर समय. Hieldberg थिएन लक्ष्य दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा, कि जसको अर्थ, यो अझै पनि एक धेरै वहन को यसको इतिहास. माध्यम टहलने लिनुहोस् यो अचम्मको स्थान र सबै कुरा हेर्न यो प्रस्ताव छ.
6. बर्न, स्विट्जरल्याण्ड
When it comes to मध्ययुगीन शहरहरू मा मध्य युरोप, बर्न स्विट्जरल्याण्ड मा अवश्य यात्रा हो. राम्रो, पुरानो शहर को एक छ, सबैभन्दा सुन्दर शहर युरोप मा. यो पूर्ण छ arcades मिति फिर्ता गर्न बीचमा उमेर र फव्वारे भनेर चित्रण विभिन्न कलात्मक तथ्याङ्कले. वास्तबमा, when it comes to कला, बर्न छ को एक ठूलो संग्रह देखि कला को कलाकार पावलले Klee. अलग देखि वास्तु सौन्दर्य र ऐतिहासिक भवन मा शहर, त्यहाँ पनि एक सुन्दर नदी माध्यम ले जा यो. नदी Aare जान्छ शहर माध्यम र यो बनाउँछ अत्यन्तै picturesque. मार्क बर्न तपाईको स्विट्जरल्याण्डको अर्को यात्रामा खोजी गर्नका लागि ठाउँ हो.
ज्यूरिख गर्न बर्न गाडिहरु
जेनेभा गर्न बर्न गाडिहरु
इंटरलेकन गर्न बर्न गाडिहरु
7. सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन सहरमा युरोप – सान Gimignano, इटाली
सान Gimignano एक पाठयपुस्तक हिल टाउन टस्क्यानी देखि. यो ड्र मा आगंतुकों हजारौं संग आफ्नो मध्ययुगीन इटालियन हेर्न. मुख्य आकर्षण सान Gimignano छ क्षितिज को लुभावनी टावर मिति फिर्ता गर्न 14 औं शताब्दी. जब क्षेत्र अन्तर्गत पतन को नियम फ्लोरेन्स, तर सबै चौध को सत्तरी दुई टावर ध्वस्त थिए. आज शहर छ, एक यूनेस्को सम्पदाको साइट, र यो इटाली धनी र आकर्षक इतिहास चासो छ कि कुनै लागि हेर्न पर्छ छ.
8. प्रयोग, बेल्जियम
धेरै उल्लेख गर्न प्रयोग रूपमा भेनिस को उत्तर. यो पूर्ण छ को नहरहरुमा, cobbled सडक, र picturesque वर्ग कि घेरिएको छन् soaring टावर र चर्च. यी बस केही आकर्षण ल्याउन हजारौं पर्यटक यो आकर्षक शहर. पैदल ब्रुग्स मार्फत प्रकृति को मिश्रण मा श्रद्धा निस्कनु र वास्तु विचित्रताहरू. को कुनै अभाव छ, मध्ययुगीन भवनहरु शहर मा, र तपाईं पक्का हुन सक्छौं कि एक यात्रा, यो शहर will leave you amazed at सौन्दर्य र शान्ति क्षेत्र radiates.
9. सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन सहरमा युरोप – Lillafured, हंगेरी
Lillafured सिद्ध फ्युजन को प्रकृति र मध्यकालीन वास्तुकला. गर्न अर्को स्थित पोखरी Hamori मा हंगेरी, यो अवश्य यात्रा स्थान छ. यसलाई सुरुमा गणना andras Bethlen द्वारा एक उपायको रूपमा बनाइएको थियो. तथापि, समय, यो भए एक शहर र एक राम्रो होटल. अचम्मको महल हो एक झरना द्वारा घेरिएको, प्राकृतिक गुफाहरु, पैदल यात्रा ट्रेल्स, र पनि काट्दै उद्यान. तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, Lilafured छ सिद्ध गन्तव्य प्रकृति प्रेमीहरूको लागि.
10. Montepulciano, इटाली
माध्यम ले जा गर्दा घाम र picturesque Tuscan रोलिंग पहाडहरु, तपाईं आउन सक्छ मा एक मध्ययुगीन शहर मा पर्वत – Montepulciano. यो छ सबै, तपाईं चाहनुहुन्छ सक्छ एक इटालियन गाउँमा. मुख्य आकर्षण जस्तै कुराहरू समावेश अचम्मको रक्सी, प्राचीन महल पर्खाल, स्वादिष्ट भोजन, र पनि थर्मल पानीका मुहानहरू. यो साँच्चै एक आकर्षक ठाउँ छ कि तपाईं सम्झना हुनेछ, सधैंभरि. सुनिश्चित गर्न रोक द्वारा तपाईं कहिल्यै यात्रा माध्यम इटाली.
सिएना Montepulciano गाडिहरु गर्न
Montepulciano गाडिहरु गर्न ग्रोस्सेटो
फ्लोरेन्स Montepulciano गाडिहरु गर्न
रोम Montepulciano गाडिहरु गर्न
When it comes to मध्ययुगीन शहर र शहरहरू, युरोप को पूर्ण छ तिनीहरूलाई. भ्रमण गर्न समय लिएर यी coves संस्कृति र इतिहास समृद्ध हुनेछ मा आफ्नो दृष्टिकोण के मान्छे सक्षम छन्. पुस्तक एक रेल on time and visit the countries that most draw your interest.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सबैभन्दा सुन्दर मध्यकालीन शहरहरू युरोप मा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-medieval-towns-europe%2F – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#beautifultowns #traveleurope मध्ययुगीन medievaltown रेल सुझावहरू रेल यात्रा